Astaamaha lagu sifeeyo sigaarka shaandhada iyo saamayntiisa caafimaad | Ragga Stylish
Paco Maria Garcia | | Caafimaadka
Suuqa sigaarka miiraha ayaa aad u kala duwan. Waxay ku yimaadaan carafo iyo dhadhan kala duwan. Iyada oo tilmaamo qorfe, vanilj, shukulaato, kafee, iyo xulashooyin kale oo badan.
Sigaarka miiraha miyuu ka yaryahay dagaalka caafimaadka? Waxaa jira fikrado kala duwan oo ku saabsan. Runtu waa taas sigaar kasta wuxuu leeyahay wadarta 4000 oo sun ah iyo 33 qaybood oo kansar ah.
1 Xogta Spain
2 Hawlgalka shaandhada
3 Tubaakada rogid
4 Kiimikooyinka kansarka
Dalkeena, boqolkiiba dadka sigaarka caba waxay gaarayaan ku dhowaad 30%. Da'da da'da, tubaakada ayaa aad ugu soo jiidata dhalinyarada. Maalin kasta waxaa jira kumanaan la sasabto, gaar ahaan sigaarka miiraha.
Waxaa jira noocyo badan oo miirayaal ahWaxay ka samaysan karaan cellulose, godadka hawo-qaadashada, walax leh daloolo badan ama ka yar, iwm. Dhab ahaan, saameynta ay soo saartay shaandhada si aad ah looma ogaan karo. Xayeysiintu wey ka miisaan badan tahay faa iidooyinka ay leedahay. Aragti ahaan, shaandhada sigaarku waxay yareyn kartaa heerka daamurka. Si kastaba ha noqotee, boqolkiiba halista badan ayaa weli jirta.
Sida naloo sheegay waxa loogu yeero “sigaarka fudud” ayaa dabin ka dhigi kara daamurka, sii deyn kara haraaga sunta ah iyo sidoo kale qiiqa ku fidi kara hawada. Ficil ahaan, naqshadeynta sigaarkan iyo miirayaasha la sheegay midkoodna ma awoodin inuu yareeyo suurtagalnimada cudurrada neefsashada.
Sigaarka uu rogo adeegsadaha badanaa wuxuu leeyahay heerar nikotiin ka hooseeya. Ama uguyaraan, taasi waa waxa la xayaysiiyo. Daraasado la sameeyay ayaa runtii muujiyey in qaabkani ka sii sun noqon karo badeecada ganacsi ee lagu iibiyo baakadaha.
Dadka sigaarka caba ee tubaakada cabba ayaa u nugul kaarboon monoksaydh ka badan: ilaa 84% ka badan sumadaha ganacsiga.
Benzene, Acetaldehyde, Butadiene ...Waxaa jira maaddooyin badan oo waxyeello leh, dhammaantoodna u nugul cudurro keena. Qaar ka mid ah waxaa loo isticmaalaa shidaalka baabuurta, ranjiyeyaasha iyo xitaa walxaha qarxa.
Ilaha Sawirka: Tabacopedia / Wikipedia
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Caafimaadka » Sigaarka miiraha miyuu dhib yaryahay?
Shan qaybood oo aad uyar si aad uqaadatid qaabkaaga hada